Ihe ị ga - ahụ n’ógbè Pontevedra (II) | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Pontevedra
Anyị emeghị ndepụta nke ihe ị ga - ahụ na Pontevedra mpaghara, na eziokwu anyị maara na anyị ga-ada na-adịghị ekwu okwu banyere niile anwansi na akụkụ pụrụ iche na e nwere n'ógbè a nke Galicia. Anyị agwaworị gị maka ụsọ osimiri, ụzọ njem ma ọ bụ agwaetiti kachasị eleta na mpaghara a, mana anyị nwere ọtụtụ ihe.
Taa, anyị ga-ekwu maka ebe ndị ọzọ, maka na Galicia enwere ọtụtụ ihe ihe osimiri ma ọ bụ gastronomy. Enwere pazos ochie, obere obodo nwere amara ma ọ bụ mgbidi siri ike site n'ọtụtụ narị afọ gara aga, tupu ndị Rom abịarute. Ihe niile a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike hụrụ na a gara na ógbè Pontevedra, otú i nwere ike ugbua tụọ ya dị ka ihe dị mkpa ebe gị ọzọ ezumike.
1 Ma ọ bụ Grove
2 Castro nke Santa Tecla
4 Omalọ Soutomaior
5 Mmiri Barosa
6 Ulo Cabo
7 Owlọ elu Viking na Catoira
Ma ọ bụ Grove
Ga ileta O Grove na-ekpori ndụ ọzọ maa mma seaside villa. Ọ bụ ebe ị ga-aga ụfọdụ n'ime ụlọ nri ya na ụlọ mmanya tapas, yana gastronomy dị mma. Ọ bụrụ na anyị nọ n'oge kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ịnwe ike ịnụ ụtọ ememme nri mmiri ha, ọ bụ ezie na enwere ike ịnụ ụtọ nke a n'afọ niile yana ọbụlagodi na ọnụahịa ka mma n'ụlọ nri mpaghara.
Castro nke Santa Tecla
N’ebe ndịda Pontevedra, anyị na-ahụ ebe a na-eleta anya, nke bụ Ugwu Santa Tecla, ebe enwere mpaghara nchekwa siri ike. Ha bụ ụlọ nke ihe ochie, na mpaghara ị nwekwara ike ịchọta petroglyphs. Ha na ekpughere anyị otu ha si bie ọtụtụ narị afọ gara aga, tupu ọbịbịa nke ndị Rom, ya mere ha nwere nnukwu ọdịnala. Na nke ahụ abụghị ịkọwa oke echiche site na mpaghara a, dịkwa nso na ókèala ya na Portugal.
Ihe ọzọ a rụrụ bụ na anyị enweghị ike ile anya na Pontevedra bụ pazos ndị mara mma, ụlọ ndị mara mma nke a na-echekwa n'ụzọ dị mma. The Pazo de Oca na La Estrada bụ nnọọ ama, na ọ bụ a mara mma n'ụlọ ebe anyị nwekwara ike ịga a ọmarịcha ubi. Ekwupụtala ya nke Akụ nke Ọdịbendị Omenala. Ọ bụ ụdị baroque-barozo, nke nwekwara ubi ndị sitere na French. Ọ na-emeghe kwa afọ, na Mọnde ọ bụla ọbịbịa na-akwụ ụgwọ ruo 12.30 pm.
Castlọ a mara mma malitere na Middle Ages, mana e megharịrị ya dịka mkpa nke oge ọ bụla, taa ọ bụ ebe ị ga-eleta bụrịrị akụkụ nke ụzọ njem nleta nke Pontevedra. Tonweta nnukwu ụlọ site na drabridge, ma ị nwere ike ịnụ ụtọ nleta ahụ site na ime ụlọ dị iche iche. Tụkwasị na nke a, ụlọ a nwere ubi mara mma ma debe nke ọma, nke camellias ya pụtara. Tụkwasị na nke a, ọ nwere oge nleta a na-eme ngosi iji nwee ihe omume dị iche dị ka ezinụlọ.
Anyị chọtara nke a ogige okike na waterfalls gụnyere n'etiti Pontevedra na Caldas de Reis. Ọ bụrụ na ị na-eme Wayzọ Portuguese gaa Santiago, ozi ọma ahụ bụ na ọ na-agabiga ebe a, yabụ nkwụsị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu. Ọ bụ ebe mara mma ị ga-eso ezinụlọ ya, yana ọtụtụ ọdụ ụgbọala na ebe ị ga-a aụ ihe ọ drinkụ drinkụ mgbe ị na-enwe ọ theụ. Ọ bụ obere nsụda mmiri, nke nwere ọtụtụ ma ọ bụ obere mmiri dabere na oge na mmiri ozuzo, mana n'oge ọkọchị ọ na-aghọ ezigbo ebe izu ike. Na mgbakwunye, o nwere igwe igwe ochie ole na ole enwere ike ihu site na ala.
Mpaghara Cabo Home, nke dị na ndịda mpaghara ahụ, bụ ebe kwesịrị nleta maka echiche dị ịtụnanya nke oke osimiri. Iji ruo ebe ahụ, ọ dị mkpa iburu egwu ọhịa. Na agbanyeghị nke a, ọ bụ ebe a gara eleta. E nwere ọtụtụ ụlọ ọkụ, dị ka Punta Sobrido, ma ọ bụ redhouse nke Punta Robaleira. Anyị ga-amalite ụzọ ahụ na echiche Caracola, jiri mkpo igwe nke ọtụtụ mmadụ na-esere foto. Emechaa anyị ga-enwe ike ịbanye Cabo Home, soro ụzọ ya wee chọpụta ụlọ ọkụ na ụsọ osimiri dị ka Melide ma ọ bụ Barra, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ụsọ mmiri kacha mma na Galicia.
Owlọ elu Viking na Catoira
Akụkọ banyere Catoira dị ogologo, ọ bụkwa na ebe a dị n'akụkụ mmiri Arousa bụ ebe nchekwa iji gbochie mbata nke ndị mwakpo na Santiago de Compostela. Eze Alfonso V bụ onye nyere iwu ka a rụọ nnukwu ụlọ ebe ndị ama ama Tlọ West, ebe a na-eme ememme Viking Landing a ma ama. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ebe a, anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ije n'akụkụ osimiri ahụ, jiri ụkwụ na-aga ije. Ọ dị ka obere ụzọ ụkwụ na-agagharị n'akụkụ osimiri, iji tụgharịa uche n'ebe a mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga - ahụ na mpaghara Pontevedra (II)
Bolvia, pearl zoro ezo nke South America